တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် ၂၀၂၀ မှစတင်သင်ယူနိုင်သည့် NAB Show NAB Show - NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » တီထွင်မှုများကဘာလဲ ၂၀၂၀ NAB မှ Spe ည့်ဟောပြောသူများကိုပြသသည်
တီထွင်မှုများကဘာလဲ ၂၀၂၀ NAB မှ Spe ည့်ဟောပြောသူများကိုပြသသည်
အကယ်၍ သင်သည်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး podcast / ရေဒီယိုလုပ်ငန်းသည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်လျှင်၎င်းကိုထပ်မံကြည့်ရှုပါ 2020 NAB ပြရန် လာမယ့်Aprilပြီလ ၂၀၂၀ That'sပြီ ၁၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်၊ 2020 NAB ပြရန် မှာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ.
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုလုံးရဲ့ဂေဟစနစ်ကိုပေါင်းစည်းလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူမျိုးစုများနောက်ခံအမျိုးမျိုးမှဖန်တီးမှုများသည် Las Vegas တွင် ၄ င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်၊ ဗဟုသုတများရရှိရန်၊ ရှေ့ပြေးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများရရှိရန်၊ အနုပညာတိုးတက်စေရန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်စဉ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရန် Las Vegas တွင် ၅ ရက်ကြာပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာ, သိပ္ပံနှင့်စီးပွားရေး။
သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းမြင်သူတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ 2020 NAB ပြရန် တက်ရောက်သူတီထွင်သူများအားလုံးကိုကြော်ငြာထားသောအခွင့်အလမ်းများစွာမှတစ်ဆင့်ထပ်မံလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်ကြီးထွားရန်အခွင့်အရေးကိုတင်ပြပါမည်။ တစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအတူပါလိမ့်မယ် speakers ည့်သည်ပီ 2020 တက်ရောက်ခြင်း NAB ပြရန်.
speakers ည့်စပီ တက်ရောက်ခြင်း 2020 NAB ပြရန် ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအမြော်အမြင်ရှိသူများမှသည် ဤရွေ့ကား စပီ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ် NAB ပြရန် ပညာရေး ရေဒီယို / အသံလွှင့်ရုံလုပ်ငန်းများ၏တံခါးဝ၌ခြေထောက်ပေါ်လာစေရန်တီထွင်ဖန်တီးသူများတက်ရောက်ရန်အတွက်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံနှင့်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းရန်နည်းလမ်းများစွာနှင့်ပုံစံများဖြင့်ဖြစ်သည်။
တစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက် Creator / Showrunner၊ ဂလိုရီယာCalderón Kellet
အများအပြား 2020 speaking ည့်သည်များမှာစကားပြော NAB ပြရန် ထိုကဲ့သို့သောသရုပ်ဆောင် / အိမ်ရှင်အဖြစ်သော့ချက်ကိန်းဂဏန်းများပါဝင်သည် တယ်ရီအမှုထမ်းရုံချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးသူကို ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကဌ၏ဆုရုပ်မြင်သံကြား၌တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောသတ်သတ်မှတ်မှတ်အနုပညာစည်းကမ်းများတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အောင်မြင်မှုအတွက်လူတစ် ဦး ချင်းကိုအပြည့်အ ၀ အသိအမှတ်ပြုသည့်ဆုဖြစ်သည်။ အခြားထင်ရှားသောစပီကာများကဲ့သို့သောကိန်းဂဏန်းများပါဝင်သည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Peter Ramsey အော်စကာဆုရကာတွန်းကားကိုရိုက်ကူးသူက The Spiderverse သို့ Spidermanနှင့် တစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက် ဖန်တီးသူ၊ ဂလိုရီယာCalderón Kelletအများကြီးပိုပြီးဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူ စက်မှုလုပ်ငန်း rockstars.
The Spiderverse သို့ Spiderman ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာPeter Ramsey
၂၀၂၀ တွင်တက်ရောက်နေသောဟောပြောသူစာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် NAB ပြရန် ထို့နောက်ထွက်စစ်ဆေးပါ www.nabshow.com/education/featured-speakers.
Creative အတွက် Guest ည့်စပီကာများဘာလုပ်နိုင်သည်
ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသိပညာဆိုတာတီထွင်မှုတိုင်းကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုကမိမိတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအစပြုသူလား၊ လိုလားသူတစ် ဦး ဟုယူမှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့တွင်ဗဟုသုတနှင့်ဉာဏ်ပညာမလုံလောက်ပါ။ ထိုနေရာသည် speakers ည့်သည်များလာရောက်သည့်နေရာဖြစ်ပြီးဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိသောစပီကာများနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများပါ ၀ င်သည် 2020 NAB ပြရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောင်စဉ်တစ်ခုလုံးမှတီထွင်ကြံဆမှုများအားရေဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့မိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့်ထပ်မံပေါင်းစပ်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပြီးဆုံးချိန်နှင့်နှစ်သစ်သည်အတူတူဖြစ်လာသည် 2020 NAB ပြရန် ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးစပ်စုသောတီထွင်ဖန်တီးမှုများစွာကိုယူဆောင်လာဖို့သေချာသည်။ The 2020 NAB ပြရန် Las Vegas မှာနီဗားဒါးမှာLasပြီ ၁၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ စပီ နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်း၏ဖန်တီးမှုတက်ရောက်ခြင်းsurelyကန်အမှန်ဖန်တီးမှုမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့စုဝေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
2020 အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များသည် NAB ပြရန် ထွက်ခွာသည် www.nabshow.com/.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Spe ည့်သည်စပီ Las Vegas မှ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow Peter Ramsey တယ်ရီအမှုထမ်း	2019-12-30
နောက်တစ်ခု: Junior Motion Graphics Designer + Animator